Einstein: Maitiro eSalesforce's AI Solution Anotyaira Kushambadzira neKutengesa Kwekuita | Martech Zone
Madhipatimendi ekushambadzira anowanzove nevashandi vashoma uye vanoshanda zvakanyanya - kuenzanisa nguva yekufambisa dhata pakati pesisitimu, kuzivisa mikana, uye kuendesa zvirimo nemishandirapamwe yekuwedzera ruzivo, kubatirana, kutora, uye kuchengetedza. Dzimwe nguva, zvakadaro, ini ndinoona makambani achinetseka kuenderera mberi kana paine mhinduro chaidzo kunze uko dzinogona kudzikisa zviwanikwa zvakakosha kuti zviwedzere kushanda kwese.
Hunyanzvi hwekugadzira ndeimwe yeaya matekinoroji - uye zvave kutoratidza kuti zvinopa kukosha chaiko kuvashambadzi sezvatinotaura. Imwe yeaya makuru ekushambadzira masisitimu ane yavo yega AI injini. Nekutonga kweSalesforce muindastiri, Salesforce neMarketing Cloud vatengi vanofanirwa kutarisa Einstein, Salesforce's AI chikuva. Kunyange injini zhinji dzeAI dzichida budiriro yakawanda, Salesforce Einstein akagadzirwa kuti aendeswe nezvirongwa zvidiki uye kusanganisa mukati mekutengesa kweSalesforce nemusika wekushambadzira… ingave B2C kana B2B.
Chikonzero chakakosha nei AI ichive chakakurumbira mukutengesa uye kushambadzira ndechekuti, kana ikaiswa nemazvo, inobvisa kusarudzika kwemukati memapoka edu ekushambadzira. Vatengesi vanowanzoita hunyanzvi uye vanofamba munzira yavanonyanya kugadzikana kana zvasvika pakumaka, kutaurirana, uye nzira dzekuuraya. Isu tinowanzo sanganisa kuburikidza nedatha kutsigira fungidziro yekuti isu tine chivimbo chakanyanya mukati.
Vimbiso yeAI ndeyekuti inopa maonero asina rusaruro, zvichibva pachokwadi, uye icho chinoramba chichivandudza nekufamba kwenguva sezvo data nyowani richiunzwa. Ndichiri kuvimba nematumbo angu, ndinogara ndichifadzwa nezvakawanikwa neAI! Pakupedzisira, ndinotenda zvinosunungura nguva yangu, zvichindigonesa kutarisa pamhinduro dzekugadzira pamwe nerubatsiro rwechinangwa data uye zviwanikwa.
Chii chinonzi Salesforce Einstein?
Einstein anogona kubatsira makambani kuita sarudzo nekukurumidza, kuita kuti vashandi vawedzere kubudirira, uye kuita kuti vatengi vafare vachishandisa huchenjeri hwekugadzira (AI) kuyera kweSalesforce Mutengi 360 Platform. Iyo yekushandisa interface inoda kushomeka chirongwa uye inoshandisa muchina kudzidza kutora nhoroondo dhata kufanotaura kana kugadzirisa ramangwana kushambadzira uye kutengesa kushambadzira.
Pane nzira dzinoverengeka dzekuchenjera kwekunyepedzera dzinogona kuendeswa, hezvino zvakakosha uye maficha eSalesforce Einstein:
Salesforce Einstein: Muchina Kudzidza
Wana zvakawanda zvekufungidzira nezve bhizinesi rako uye vatengi.
Einstein Discovery - Wedzera kugadzirwa uye uwane akakodzera mapatani mune data rako rese, ingave inogara muSalesforce kana kunze. Tsvaga zvakapusa AI nzwisiso uye kurudziro kumatambudziko akaoma. Wobva watora matanho pane zvawakawana usina kumbosiya Salesforce.
Einstein Kufembera Kuvaka - Kufanozivisa zviitiko zvebhizinesi, senge churn kana kukosha kwehupenyu. Gadzira yakasarudzika AI mamodheru pane chero Salesforce munda kana chinhu chine mabhatani, kwete kodhi
Einstein Inotevera Yakanyanya Chiito - Dzorera zvinokurudzirwa kuvashandi uye vatengi, mukati maapp mavanoshanda. Tsanangura zvinokurudzirwa, gadzira maitiro ekuita, gadzira fungidziro mamodheru, ratidza mazano, uye gadzira otomatiki.
Salesforce Einstein: Natural mutauro Kugadziriswa
Shandisa NLP kutsvaga mitauro mitauro iwe yaunogona kushandisa kupindura mibvunzo, kupindura kune zvikumbiro, uye kuona hurukuro pamusoro pechiratidzo chako pawebhu rese.
Mutauro weEinstein - Nzwisisa kuti vatengi vanonzwa sei, otomatiki nzira dzemibvunzo, uye gadzirisa yako workflows. Vaka mutauro wechisikigo mukugadzirisa kwako maapplication kuti aronge chinangwa chepfungwa nemanzwiro mumutumbi wemavara, zvisinei kuti ndeupi mutauro.
Einstein Bots - Nyore kuvaka, kudzidzisa, uye kuendesa tsika bots pamadhijitari chiteshi ayo akabatana kune yako CRM dhata. Simbisa maitiro ebhizinesi, ipa simba vashandi vako, uye ufadze vatengi vako.
Komputa yekuona inosanganisira yekuona pateni chitupa uye kugadzirisa data kuteedzera zvigadzirwa zvako uye brand, ziva zvinyorwa mumifananidzo, uye nezvimwe.
Einstein Chiono - Ona hurukuro yese pamusoro pechiratidzo chako pasocial media nekupfuura. Shandisa kuchenjera kwekucherechedzwa kwemifananidzo mumapurogiramu ako nekudzidzisa zvakadzama mamodheru ekuziva yako brand, zvigadzirwa, uye zvimwe.
Salesforce Einstein: otomatiki Kutaura Kuzivikanwa
Otomatiki mataurirwo ekuziva anodudzira mutauro wakataurwa kuita zvinyorwa. Uye Einstein anoitora nhanho yekuenderera mberi, nekuisa iwo iwo mavara mune mamiriro ebhizinesi rako.
Einstein Inzwi - Tora marondedzero ezuva nezuva, gadziridza, uye utyaire madhibhodhi nekungotaura kuna Einstein Izwi Mubatsiri. Uye, gadzira uye utange yako tsika, yakamisikidzwa izwi vabatsiri neEinstein Voice Bots.
Shanyira Salesforce's Einstein saiti kuti uwane rumwe ruzivo nezve chigadzirwa, huchenjeri hwekunyepedzera, kutsvagisa kweAI, Shandisa Nyaya, uye Inowanzo Bvunzwa mibvunzo.
Ive neshuwa yekubata yangu Salesforce kubvunza uye yekushandisa yakasimba, Highbridge, uye isu tinogona kukubatsira iwe nekutumira uye nekubatanidza chero imwe yeaya marongero.
Tags: chakagadzirwa njerecomputer visioneinsteineinstein nlpeinstein chiratidzoeinstein izwikuongorora mifananidzokugadzirisa mutauro mutaurosalesforceSalesforce Einsteinsalesforce einstein fungidzirokufungidzira kwevashandichii chinonzi salesforce einstein
Kutanga Kushambadzira Automation yeYako Online Kosi yekuhwina Yakawedzera B2B Kutengesa